La Ogaaday: Messi,Ozil Mise De Bruyne? Boqorka Caawinta Ee Horyaalada Yurub Oo La Ogaaday – Kooxda.com
Home 2018 February France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino La Ogaaday: Messi,Ozil Mise De Bruyne? Boqorka Caawinta Ee Horyaalada Yurub Oo La Ogaaday
La Ogaaday: Messi,Ozil Mise De Bruyne? Boqorka Caawinta Ee Horyaalada Yurub Oo La Ogaaday
Kubada cagta ayaan haatan kaliya lagu tartamin gool dhalin laakiin waxa mar-marka qaar si weyn loogu tartamaa caawinta goolasha oo ay xiddigo badan ka jecel yihiinba in ay caawiye gool ka noqdaan halkii ay dhalin lahaayeen iyagun.
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Man City ee Kevin De Bruyne Ayaa leh rikoor cajiib ah oo gool caawinta ah isaga oo kulankii sabtidii 3 gool caawiye ka noqday 5-tii gool ee ay kooxdiisu ka dhalisay kooxda Leciester city.
Xiddiga reer Belguim ee 26 jirka ah ayaa caawiye ka noqday 3-dii gool ee ugu horeeyay ee ay kooxdiisu dhalisay xilli uu ka caawiyay kooxdiisa in ay ku sii dhawaato ku guulaysiga horyaalka.
Kevin De Bruyne ayaa kooxda Pep Guardiola ka caawiyay in ay 16 dhibcood ka hor marto kooxda ay jaarka yihiin ee Man United oo guuldaro niyad jab leh kala kulantay Newcastle.
Sergio Aguero ayaa dhaliyay 4 gool laakiin xaqiiqda ayaa ah in De Bruyne ahaa xiddigii khaatiga ka dhigay daafacii Leicester city ee dhibaatooday.
3-dii gool ee uu caawiyaha ka noqday ayaa De Bruyne ka caawiyay in uu noqdo xiddiga ugu fiican adduunka ee ugu caawinta badan.
Goolkii 3-aad ee uu caawiyaha ka noqday ayaa ka caawiyay in uu Lionel Messi ka qaado booska 1-aad ee xiddiga ugu caawinta badan tan ilaa 2012/13.
Kadib markii uu Genk ka soo tagay halkaas oo uu muddo 7 sano ah joogay Waxa uu ku soo biiray kooxda chelsea waxana isla markiiba Amaah loogu diray Werder Bremen.
Tan ilaa wakhtigaas Xiddiga reer Belguim ayaa noqday boqorka caawinta isaga oo waliba si fiican ugu soo baxay kooxaha Wolfsburg iyo Man City.
ilaa wakhtigaas xiddiga reer Belguim ee 26 jirka ah ayaa ciyaaray 176 kulan tartamada horyaalada waxana uu caawiye ka noqday 77 gool.
Waxa kaalinta 2-aad ku jira xiddiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi kaas oo caawiye ka noqday 76 gool 190 kulan oo uu ciyaaray isaga oo 14 kulan ka badan De Bruyne.
Hadaba Halkan Kaga Bogo 10-ka Xiddig ee ugu caawinta badan tan ilaa 2012/2013 & Waliba kulamada ay ciayareen: